Umthandazo Uzuko Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Eli xesha siza kuthetha ngalo Umthandazo wozuko, umthandazo onamandla amakhulu okusebenza, ukuze kuqinisekiswe ukubaluleka kwale ngoma yeenkonzo kunye nokuba abantu abathandaza lomthandazo bayayazi intsingiselo ebonakaliswe kwigama ngalinye. Ukuba yile nto uyikhangelayo, siya kubonisa indlela echanekileyo yokubiza amagama, intsingiselo kunye nokunye okuninzi.
Chonga ubukhulu beNkosi ngozuko lomthandazo.
1 Umthandazo Uzuko njengomthandazo onamandla kwaye osebenzayo
2 Imvelaphi yozuko
3 Iintsingiselo zoMthandazo wozuko kwi-liturgy
4 Thandaza iGloria ngokuchanekileyo
Umthandazo Uzuko njengomthandazo onamandla kwaye osebenzayo
Imithandazo kuThixo yayivakaliswa ngesiLatin, nangona kungenxa yokusasazeka kwale nkolo ngalo lonke ixesha el mundo, ukuguqulelwa kwaqala ngeelwimi ezahlukileyo zelizwe ngalinye, ukuze kuqinisekwe ukuqonda kwabathembekileyo kunye nokubethelela indlela abasondela ngayo eNkosini naseparadesi.
La umthandazo uzuko Ngumthandazo osisondeza kuthi, ngokudumisa ngokungagungqiyo, kuYise, Nyana noMoya oyiNgcwele, osetyenziswa njengeculo kwiitempile zonqulo lweNkosi. Ngumthandazo ochaza ubukhulu besomandla, abantu babo abathandazayo baqinisekisa imbeko efanele uThixo nothando olungagungqiyo abamnika lona.
Kukho inani elikhulu lee-doxologies okanye iindumiso eziya kuThixo, nangona kunjalo, umboniso owehlisiweyo yi-Gloria Patria, ebizwa ekugqityweni komthandazo omde, kule ndumiso isiqwenga ekufuneka sisigcine engqondweni siyacengcelezwa, uBathathu Emnye Ongcwele (uYise, uNyana noMoya oyiNgcwele). Kuyaziwa njengobunye, kuba bamele umntu omnye kwaye ukudumisa akufuneki kwenziwe ngokwahlukeneyo. Ukugqitywa kwenkonzo, i umthandazo uzuko banzi.
Unokuba nomdla: Dumisa uMariya umthandazo
Umthandazo wokuqokelela, ukubongoza kukaThixo
Imvelaphi yesiqendu ixhomekeke kumazwi awathethwa ziingelosi ngexesha lokwazisa ngokufika kosana olunguYesu eBhetelehem phambi kwabelusi, la mazwi athatyathwa kwiVetus Latina. Emva koko, indumiso iqulethe umbulelo kuZiqu-zintathu oNgcwele, uYise, uNyana kunye noMoya oyiNgcwele, ukongeza ekubandakanyeni kweevesi ukuyinika eyayo i-doxology.
Umbhalo wokuqala wemvelaphi yesiGrike unembali ekude kubuKrestu. Kukho enye indlela yokubhala eyafunyanwa ngenkulungwane yesithathu okanye kwiminyaka engaphambili. Kodwa owona mthandazo ubalaseleyo wozuko uvela kwinkulungwane yesine kwaye ayiqhelekanga kwezinye iiturgy zamaKristu, kuba zihlala zisebenzisa isicatshulwa esivela kwifom yesiLatin, kuba iqulethe amabinzana anje nge "Tu solus altissimus and Cum sancto Spiritu".
UPopu Telesphorus wayengowokuqala ukufaka le ndumiso kwizifundo, ngakumbi kwiMisitho yeKrisimesi eqhelekileyo, kwiminyaka eyi-128. Ke, kwiminyaka engama-498, uSymmasi wagqiba kwelokuba enze le ngoma kulo lonke imibhiyozo yangeCawa, eyathi ekuqaleni yayigcinelwe kuphela ababingeleli ngemihla ye-Ista, nangona kunjalo, ngasekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX, kwaqala imvume yokucela umthandazo wozuko ukuba ufundwe kuyo yonke imithendeleko. Nangona ingazange ithethwe ngexesha lemisitho yeAdvente de kube nguMisa IKrismesi.
Emva kwexesha, kumaXesha Aphakathi, kwathandazwa iivesi ezintsha kumthandazo, inguqulelo ehlengahlengiswe kwimibhiyozo yeNtombikazi enguMariya yade yenziwa, le nguqulo yasetyenziswa kuwo wonke ummandla waseYurophu de kwangunyaka we-1570.
Iintsingiselo zoMthandazo wozuko kwi-liturgy
Ingoma kaGloria kunye nomthandazo oqokelelweyo ziinkonzo zentshayelelo kulungiselelo lweMisa eNgcwele. Ukwenza ingoma yozuko, eyinguqulelo emfutshane yomthandazo, ngexesha le-liturgy imele ukutyekela okuvela ezulwini ukuya emhlabeni, apho kuvulwa khona umhlaba usiya ezulwini ukuphendula.
Ngexesha lomsitho, umbingeleli ubhengeza ukuba "Masithandaze" ukubonisa ukuqala komthandazo ozukileyo, kwaye uhlala emisa kancinci emva koko. Kungenxa yokuba wabela ixesha elifutshane abo bakhoyo, ukuze babazi ubukho bakhe phambi kweNkosi kwaye ke bakwazi ukwenza iminqweno ngomoya wabo. Kwangokunjalo, umzuzu wokuthula wenzelwa ukuba abo bakhoyo bamamele ilizwi labo langaphakathi nelomoya oyingcwele.
Umthandazo wokuqokelela uqale wakhiwa ngokucela kukaThixo, kweli candelo lokuqala sikhumbula into eyenziwe yiNkosi kuthi kwaye sivakalisa ukumnqula: `` Uzuko kuThixo ezulwini nasemhlabeni uxolo lube ngabantu abathandwa nguYehova. Ngenxa yobuqaqawuli bakho obubalaseleyo siyakudumisa, siyakusikelela, siyakuhlonela, siyakuzukisa, siyabulela kuwe, Nkosi Thixo, Kumkani wasezulwini, Thixo uYise onamandla onke, okuphela koNyana, uYesu Krestu. ''
Kwinxalenye yesibini yomthandazo wokuqokelelwa, kwenziwa isicelo eNkosini, simcela ukuba angenelele: '' Nkosi Thixo, Mvana kaThixo, Nyana kaBawo; wena osusa isono sehlabathi, yiba nenceba kuthi; Wena ususa isono sehlabathi, phulaphula ukutarhu kwethu; Wena uhleli ngasekunene kukaBawo, yiba nenceba kuthi; kuba nguwe wedwa oyiNgcwele, nguwe wedwa Nkosi, ungoyena Uphakamileyo, uYesu Krestu, enoMoya oyiNgcwele ebuqaqawulini bukaThixo uYise.
Ngexesha leMisa eNgcwele umbingeleli uyakubhengeza oku umthandazo uzuko ukugcina iingalo zakhe zolulekile kwaye zivulekile, ngale nto uxelisa uYesu Kristu xa esemnqamlezweni.
Thandaza iGloria ngokuchanekileyo
Uninzi lwamarhamente aliphindaphinda igama elithi `` Uzuko '' kumthandazo omfutshane owenziwa ekupheleni komthandazo omde, yile: `` Uzuko kuYise, uzuko kuNyana, Uzuko kuMoya oyiNgcwele ''.
Kodwa yimpazamo eqhelekileyo, njengoko sichazile uBathathu Emnye oyingcwele, ngoko ke ayinakubizwa ngokwahlukeneyo, kwaye ukwenza uzuko ngale ndlela kubonakala ngathi umthandazo ubhekiswe kwizithixo ezintathu ezahlukeneyo. Kungenxa yoko le nto kufuneka kubhengezwe uzuko olunye kwaye emva koko kubhekiswe kubathathu emnye Ongcwele: "Uzuko kuYise, kuNyana nakuMoya oyiNgcwele."
Ukuba unomdla wokwazi okungakumbi malunga nentsingiselo ye umthandazo uzukoNdiyakumema ukuba ubone le vidiyo ilandelayo: